Isoftware yeGeo5 yoomatshini bomhlaba -iGeofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/I-Software ye Geo5 yomatshini womhlaba
I-Software ye Geo5 yomatshini womhlaba
Zimbalwa iinkqubo zenkqonkqo ziye zamchukumisa kwiminyaka yamuva.
Eli xesha ndibetha ngenye yeentengiso zeGoogle AdSense kwiblogi ye MundoGeek, nangona ndineentloni ukuchofoza njengoko thina sonke ukwenza imali iiblogi zethu ngaloo ndlela, ndifumene isofthiwe esenza yonke into kunye nomkhwa wam wokungakholelwa kwi-Alkazeltzer ibandakanye ingqalelo yam.
Ndiyathetha iGoXXUMUMX, isofthiwe esetyenziswayo FineSoftware, ukusebenzisa i-tranquility yeCawa ma sijonge ukuba le teknoloji ingenza njani phakathi kwezinye izicelo:
I-Geo5 kunye neentlobo zayo zeenkqubo zenzelwe isisombululo seengxaki ze-geotechnical, ezenza ukuba zihluke kwezo zipapashwe yi-EaglePoint, iBentley kunye AutoDesk, ogxininiso lwazo lujoliswe kwi-design yezakhiwo kunye nophuhliso lwehlabathi, nangona benza nezinye izinto.
Ke kule nto, i-Geo5 ithatha ikhredithi ngokuba sebaleni, nangona iphononongwe ngamanye amaqonga, ixabiso liya kuhlala likhuphisana ukuya kwinqanaba loko kufunwa yiNjineli yoLuntu okanye iGeologist. Isicelo ngasinye sinexabiso kwilayisensi nganye eboniswe ngasekunene, lo ngumkhwa osempilweni okhokelela kwintengiso; abantu abaninzi banxulumanisa ukunqongophala kwamaxabiso kunye namaxabiso agqithisileyo.
Nangona izixhobo ze Geo5 zininzi, ukudibanisa kwayo kubonakaliswe kwinto yokuba uyilo luyakuthunyelwa ukusuka kwinkqubo enye ukuya kwelinye; ngenxa yolu hlobo, udonga olugcinayo lunokuhlaziywa kwisicelo esinye, kodwa ke ukulungiswa komlenze kunokuthunyelwa kwesinye isicelo emva kokuba ububanzi bomda buchazwe.Ukongezelela, kukho izicelo zendonga zesikrini kunye nezokwakha izakhiwo usebenzisa indlela yokugqibela ye-element (MEF), zombini kwii-tunnels nakwezinye izisombululo ze-geotechnical.
Kukho nezicelo ezininzi zokuyila izakhi zesiseko, ezifana nemigodi, imilingo, ii-micropiles, i-slabs zesiseko kunye neenyawo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, esi sixhobo sibonakala njengesisombululo esifanelekileyo kwinkampani ezinikele kugqirha we-geotechnical kwiindawo zayo ezahlukeneyo zobungcali. Inkqubo iquka uhlalutyo lozinzo lwamathambeka, amathambeka amatye kunye nokuhlaliswa kwemihlaba ngenxa yokwakhiwa kweetonela, oku kubandakanya ukulinganisa imodeli yendlela yedijithali (DTM), zombini kwiitonela nakwezinye izisombululo ze-geotechnical.
I-Geo5 iveliswa yi-FINE, njengoko ichaziwe, malunga neenkampani ze-1,500 kunye nabachwephesha basebenzisa ubugcisa babo, kubandakanywa ARUP, Ndiyakhumbula kakuhle le nkampani ye-mega kuba iphumelele ama-BE Awards kunye neCube yamanzi esiyibona kuyo yonke iMidlalo ye-Olimpiki.
Ndiyilandile, inguqu yemoyi inzima ngaphezu kwe-80 MB kwaye iphantse zonke iimpawu ngaphandle kokugcina okanye ukushicilela iiprojekthi, kodwa akukho mingeni ekuhlaleni okanye ekungeneni kwedatha.
Ukuqulunqwa kwendlela yokubambisana kucocekile, ukugcina ipaneli ngakwesokudla "cishe yonke into" efunekayo ngaphakathi kwenkqubo yokusebenza. Iintlobo zeelwimi zibanzi, kwaye kunjalo neSpeyin, kuquka ukuqeqeshwa ngeemviwo zevidiyo kunye neencwadana ngokupheleleyo kwiSpanish.
Esi sixhobo sisekwe kwisicelo esidala esazalwa sivela kwiFakhalthi yoBunjineli yeDyunivesithi yasePrague, ngombala ocacileyo ovela kwiWindows 3.1. Ngoku unendawo eyomeleleyo kakhulu ebonisa imizobo ekulula ukuyichaza kunye namagama ezinto iinjineli ezisetyenziselwa ukuzibona.
Emva koko iingxelo ziyimemori epheleleyo, apho unokukwazi ukwenza ngokweenkcukacha idatha nenkampani kunye nabasebenzisi.
Ngokungafaniyo noncedo oluqhele ukuba nazo iinkqubo, zijolise kwizikrini kunye nokusebenza kwenkqubo, iGeo5 inezinto zethiyori ezixhasa iindlela zokwenza. Ibandakanya zombini imigangatho kunye neenkqubo zokubala ngokwasemzimbeni.
Nangona inkqubo ivela eCzechoslovakia, iyahambelana nemimiselo yehlabathi, kwaye kunjalo, imimiselo yaseYurophu.
Ukubona ulwazi oluninzi lunakho Tyelela iWebSoftware yewebhusayithi.
AutoDesk Bentley Systems Blog umbono yam yokuqala
I-Facebook, enye indlela yokuchitha ixesha lakho?
MIGUEL FIGUEROLA uthi:
YINTONI YOKUBALULEKILEYO KWENKQUBO EZIQHELEKILEYO KWI-GEO5, OKANYE OKUBALULEKILEYO KWI-SOFTWARE
Siyaxolisa Kule ndawo asikhuthazi ukusetyenziswa kakubi kweelayisenisi.
Molweni zihlobo ndikhangela ukuqhekeka kwe-geo5… kunzima kakhulu ukuyifumana… ndingayivuyela into yokuba umntu andibambe isandla.
Ndakhuphela demo kwaye yeyona ilungileyo Ndakhe ndabona, kodwa kufuneka lomyalelo Spanish ukuphanda ngokupheleleyo, ukuba umntu wayesazi okanye wayesazi ikhonkco apho uyilanda nceda ngeposi apha, ngiyabonga kusengaphambili
Ukungalungi, andazi ukuba yeyiphi isicelo esetyenziswayo. Buza kwiforamu yeGabriel Ortiz, mhlawumbi apho uya kufumana impendulo
Ndingathanda MAKHE ngawe, Ucwaningo mna ndisebenza ubucukubhede UMHLABA isetyenziswe NEENDLELA, njengokuba nawe usazi APHA EZININZI nemvavanyo zaselaborathri zisingathwa AS NGABA GRANULOMETRIES KUNYE imida ye UKUVISISANA njl, Ngokuqhelekileyo la ziboniswe eliphezulu NOKUKHANGELA theyibhile isishwankathelo, XA axhobe A ngesandla SOLOKO NEZINTO OKANYE IIMPAZAMO uluphumelele uvavanyo ULUHLU, ngenye imini ndaxelelwa ubukho iNKQUBO KWESO uHLOBO KUNYE Ndikhangela IN THE RED nantoni na lula lo msebenzi, ndiyathemba Comments Gracias .
Kwiphepha unokufumana ulwazi loqhagamshelwano kunye nabasasazweni lakho
Inyaniso ibonakala kum isofthiwe enhle kwaye ndingathanda ukuyifumana.
Kodwa andazi ukuba njani .. Kwaye ndiyakufuna incwadi yakho yemigaqo, nceda… ..Ukuba kukho umntu owaziyo ukuba uyithenga phi, thumela umyalezo kwi-imeyile yam….
Ndiyabulela iinkcukacha ezongezelelweyo i-Ignacio, siya kubona ukuba ngelinye ilanga ndijonge kwi-Midas gts.
Ndiyabulela isishwankathelo esicacisiweyo.
Ukongezelela, i-software ye-GEO5 ye-software ye-geotechnical iyisisombululo esilula kunye esinamandla ukusombulula iingxaki ze-geotechnical. Iiprogram zisekelwe kwiindlela zokuhlalutya zemveli kunye nendlela yokugqibela ye-element (FEM).
I-GEO5 ifanelekile ukusombulula imisebenzi elandelayo ye-geotechnical:
Uhlalutyo lokuzinza ukuzinza
Iimpawu zendawo yeDivital
Uyilo lokugcina iindonga
Izakhiwo zangaphantsi, njl
Unokufumana ulwazi olungakumbi http://www.finesoftware.es/
Unokukhuphela i-demo kwi http://www.finesoftware.es/descarga/
Ingathengwa kwi-intanethi http://www.finesoftware.es/compra/
Ukongeza ukubulela isichaso, bendifuna nokubhala phantsi umbulelo wam ngohlalutyo- isishwankathelo esiye sandivumela ukuba ndijonge ngokukhawuleza kwinkqubo. Kakuhle kakhulu.